Amin Caamir imisa lacag ah ayaa Sawirkan lagu siiyey? | allsanaag
Amin Caamir imisa lacag ah ayaa Sawirkan lagu siiyey?
Amiir Caamir oo labaatankii sawir ee ugu danbeeyey ee uu sameeyey, tobon ka mid ah uu lacag kaga qaatay mooryaanta inuu aflagaadeeyooo uu sawir xun ka bixiyo Ra’isawasarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta soo bandhigay sawir uu lacag ku qaatay kuna amaanyo Muuse Biixi.
Hadba waa kuma Muuse Biixiga uu Amiin Caamir lacagta kaga qaatay inuu sawir qurxoon ka sameeyo
Muuse Biixi waa hogaamiyaha Xisbiga Kulmiye, oo u ololeenaya inay Soomaali inteeda kale ka go’aan. Maalintii shalay oo bishu ahayd ‎‎October ‎26, ‎2017, Muuse Biixi wuxuu amaray dad ugu mudaharadayey midnimada Soomaaliya degmada Badhan ee Gobolka Sanaag in la xabadeeyo. Sideed qof oo Caruur iyo waayeel ah ayaa ku dhaawacmay.
Marka labaad Muuse Biixi, waa danbiile dagaal waa dagaal ooge, Beesha uu ka soo jeedo intooda badan ayaa qirtay inuu Dumar iyo Caruurku xasuugay gobolka Awdal waqtigii uu madaxda ka ahaa jabhaddii SNM
Marka sadexaad maalintii uu dilayey dadka laga tirada badan yahay, oo umaddii caqliga qabtaa ay ku lahayd war Muusoow umadda Islaamka ah sida ka daa oo duco qaado. Jawaabtiisii waxay noqotay ” Aniga oo wax dili kara duca qaadan maayo.
Ugu danbayntii Amin Caamir haddii aad garan wayday macnaha midnimada Soomaaliya oo aad la safatay kuwii dalka Soomaaliya kala g’oynay, shaqona aad ka dhigatay inaad lacag ku qaadato aflagaadada Cumar Cabdirashiid, Waxaan ku xasuusimayaa maalintii awoowahaa Baaniyaal Bajiyaha iyo Sambuuska Xamar weyne ku gadayey, Cali Sharmaarke kuwa aad amaanayso awoowayaashood ayuu u talinayey . Maalintii Caamir jidka Marwaas dharka ku tolayey Cabdirashiid Cali sharmaarke Soomaaliya ayuu madaxweyne ka ahaa. maanta Amin Caamir ‘adiga’ OO maanta Mooryaanta Muuse BIIXI iyo Mahad Salaad jeebkooda u jeedo isagu ‘ Cumar Soomaaliya labo mar ayuu Soomaaliya ra’isawsaare ka soo noqday” .Hal maalina laguma soo eedayn dad uu dilay iyo beel u aflagaadeeyey
← Reer Maakhir ayaan garanayaa. Shacabkii Badhan ku dhaawacmay oo la diiwaan geliyey →